Image | HimiloNetwork
Himilo December 2, 2018	Leave a comment 316 Views
ISTANBUL (Himilonetwork) – Meel kumaankun mile u jirta guryahooda, carruurta Uygur sida Shkur Abliz waxay ugu danbeyn helayaan fursado ay ku bartaan afkooda hooyo iyo barashada diinta Islaamka gudaha Iskuulka Tangnuri ee caasimadda Istanbul – barashada luqadda ama afka Uygur iyo Qur’aanka ayaa labadaba laga mamnuucay gudaha gobalka Xinjiang ee Shiinaha. Asya Abliz, oo ah hooyada dhashay Shkur waxaa ka go’an inay wiilkeeda ku ilaaliso ...
Himilo December 1, 2018	Leave a comment 404 Views
ISTANBUL (Himilonetwork) – Yusuf Islam, oo ah Muslim u dhashay dalka Britain kaas oo markii hore la dhihi jiray Cat Stevens ayaa ku bogaadiyay Dunida Muslimka inay sare u dhigaan hankooda iyo hiigsiga ku jira. “Way adag tahay in la helo dal Muslim ah oo soo saaraya sancada diyaaradaha, gaadiidka iyo telefeshannada,” ayuu yiri Yuusuf, sida laga soo xigtay Anadolu Agency. “Dunida Muslimka ...
Masjidka Malmo ee Sweden oo Quudinaya Dadka Darbi-jiifta ah!
Himilo December 1, 2018	Leave a comment 271 Views
MALMÖ, Sweden (Himilonetwork) – Masjidka Malmo oo ah midka labaad ee ugu da’da weyn dalka Sweden ayaa cunno iyo hu’ u qeybinaya dadka darbi-jiifta ah xilliga qaboobaha uu soo darsaday, sida ay soo xigatay World Bulletin. “Masjidka Malmo wuxuu cunno ku filan siinayaa darbi-jiifta, qofna looga tagi maayo gaajada,” ayay tiri Eva, oo kamid ah xubnaha guddiga Masjidka. “Waddooyinka waxaan ku ...
Masjid ku yaalla Malaysia oo soo jiidanaya Indhaha Dalxiisayaasha Caalamka.
Himilo December 1, 2018	Leave a comment 537 Views
BESUT (Himilonetwork) – Kaddib lix sano oo la dhisayay, hadda Masjidka Eight Dome oo dhaca xaafadda Kampung Lapan Kotak, galbeedka Malaysia, wuxuu si mid ah usoo jiidanayaa indhaha Muslimiinta gudaha iyo dalxiisayaasha dibadda uga yimaada dalka. “Dadku waxay ilaa dhinaca waqooyi ee dalka uga yimaadaan Masjidkan si ay ugu dhex tukadaan,” ayaa lagu yiri qoraal ay soo xigatay Bernama News Agencies. “Jiritaanka Masjidkan ...